Saalax Cali Maxamuud oo ah garsoore katirsan Maxakamadda gobolka Banaadir ayaa 20-October-2020 waxa uu soosaaray xaashida summaddeedu tahay M.G.B. DDL/242/2020, Garsoore Saalax waxa uu Warqaddaas u diray Drs Safiya Maxamed Maxamuud oo ah dacwad-ooge & kuxigeenka xeer illaaliyaha guud ee Qaranka, ujeeddada warqadda garsooruhu waxa ay ahayd xukunka ganaax lacageed oo Maxkamaddu ku ridday kuxigeenka xeer illaaliyaha guud dacwad-ooge Safiya Maxamed Maxamuud oo sida uu Xaashida xukunka ku sheegay garsoore Saalax lagu xukumay in ay lacag dhan $500 (Shan boqol oo dollar) ku shubto qasnadda dowladda.
Sida garsooruhu ku sheegay Warqaddiisa Sababta ganaaxa lacageed loogu xukumay dacwad-ooge Safiya Maxamed Maxamuud waxa ay ahayd in aysan soo xaadirin dhegeysiga galka dacwadeedka ciqaabta ee tirsigiisu yahay 242/2020 uuna eedeysane ka yahay Axmed Xasan Maxamuud iyada oo ay gaarsiiyeyaashu u geeyeen farriinta muddo 2 goor ah hayeeshee dhegeysigu dacwaddu u baaqday in aysan soo xaadirin cudur-daar la’aan sida lagu sheegay xaashida.
Dacwad-ooge Safiya Maxamed Maxamuud kuxigeenka xeer illaaliyaha guud ayaa iyaduna qortay Warqadda summaddeedu tahay G/L. XIG/1641/2020 kuna taariikeysan 21-10-20 taas oo u muuqata in ay jawaab u tahay Warqadda hore ee garsoore Saalax Cali Maxamuud.
Ujeeddada warqadda Dacwad-ooge Safiya Maxamed Maxamuud waxa ay xambaarsan tahay eedeyn kadhan ah garsoore Saalax Cali Maxamuud, waxa ay ku eedeysay in uu ku xadgudbay dhowr qodob oo kamid ah xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo in uu si qaldan u adeegsaday Qod 195 ee XHCQ iyo in uu soo eedeeyey qof xasaanad leh, sidaas awgeed waxa ay maxkamadda gobolka Banaadir weydiisatay in ay muddeyso dacwadda kadhanka ah garsoore Saalax Cali Maxamuud.
Sida ay Axadle u xaqiijiyeen xubno kamid ah xafiiska XIG & Maxakamadaha Kiiska u dhexeeya Dacwad-ooge Safiya Maxamed Maxamuud & garsoore Saalax Cali Maxamuud ayaa weli taagan oo aan xal loo helin, sababtana waxa ay ku sheegeen in aan hogaamiyayaasha Maxkamadaha iyo xeer illaalintu aanay wax weyn kala socon waxa ka socda xafiisyadooda.
Haddaba muranka iyo wada-shaqeyn xumida u dhexeysa Maxkamadaha & Xafiiska xeer illaalintu ma tahay sabab horseedi karta waxtar iyo nuxur la’aan ku dhacda adeegga garsoorka iyo hannaanka hirgelinta caddaaladda?
Shanta Meelood Ee Dagaalka Ugu Adag Ku Dhex Mari Doono
Khabiirka Paul Merson Oo Digniintii Ugu Dambaysay Siiyey